‘सुपर अर्थ’ पत्ता लाग्यो, जीवनको अस्तित्व हुनसक्ने अनुमान (फोटोफिचर)
काठमाडौं, चैत २५ । खगोलविद्हरुले पृथ्वीमाजस्तै वातावरण भएको ग्रह पत्ता लागेको बताएका छन् । जहाँ पृथ्वीमाजस्तै जीवनको अस्तित्व भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकम बागलुङले निःशुल्क सिम बाँड्दै
बागलुङ, चैत २१ । नेपाल टेलिकम बागलुङले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा सिमकार्ड वितरण गरेको छ ।
सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ र एस ८ प्लस सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ?
काठमाडौं, चैत १७ । सामसुङ कम्पनीले ‘ग्यालेक्सी नोट ७’मा आएको खराबीका कारण ठूलो घाटा सहेको बताउँदै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अत्याधुनिक सुविधासहित नयाँ मोडल ‘ग्यालेक्सी एस ८’ र ‘एस ८ प्लस’ सार्वजनिक गरेको छ ।
‘ब्ल्याक होल’बारे नयाँ तथ्य बाहिरियो, सूर्यभन्दा तातो, चम्किलो ताराहरुको निर्माण ?
काठमाडौं, चैत १५ । आकाशगंगा (ग्यालेस्की)को केन्द्रभागमा रहेको सूर्यभन्दा अरबौं गुणा ठूलो सबैभन्दा विशाल कालो छिद्र (ब्ल्याक होल)ले अविश्वसनीयरुपमा सूर्यभन्दा तातो, चम्किलो र उच्चगतिको नयाँ–नयाँ ताराहरु निर्माण गरिरहेको नयाँ तथ्य खगोलविद्हरुले पत्ता लगाएका छन् ।
काठमाडौं, चैत १५ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल सेवाका सेवाग्राहीलाई ‘ब्यालेन्स’ नहुँदा ‘कल’ गर्न ‘लोन’ रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भियतनाम, चैत १४ । भियतनामको राजधानी हानोइमा आगामी बुधबारदेखि सुरु हुन गइरहेको वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रविधि मेलामा विश्वका विभिन्न मुलुक तथा क्षेत्रसमेत १७ स्थानका १२० ओटा वैज्ञानिक संगठन तथा कम्पनीहरु सहभागी हुने भएका छन् ।
सगरमाथा चढ्नेहरु अब यसरी हुन्छन् निगरानीमा, लागू हुँदैछ जीपीएस प्रणाली
सिबी अधिकारी (रासस): काठमाडौं, चैत १२ । सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगी सगरमाथा सफल आरोहण गरेको दाबी गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सगरमाथा आरोहीलाई ग्लोबल पोजिसिङ (जीपीएस) सिस्टममार्फत् ट्याकिङ (निगरानी) गर्ने भएको छ ।
आतंककारीसँग सम्बन्धित ६ लाख ट्वीटर एकाउन्ट बन्द
काठमाडौं, चैत १२ । सामाजिक संजाल ट्वीटरले ६ लाखभन्दा बढी ट्वीटर एकाउन्ट बन्द गरेको छ ।
मंगलग्रहमा मानवबस्ती निर्माणका लागि ट्रम्पको अग्रसरता
काठमाडौं, चैत १० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलग्रहमा मानवबस्ती निर्माणका लागि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा)लाई अहिलेसम्मकै धेरै रकम उपलब्ध गराएका छन् ।
बेलायतमा ल्यापटप,ट्याबलेट बोकेर विमान चढ्न नपाइने
काठमाडौं, चैत ९ । बेलायतले विद्युतीय सामान लिएर विमानमा चढ्न नपाउने नियम लागु गर्ने भएको छ ।
अब आउँदैछ यस्तो अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ‘स्मार्ट ज्याकेट’
काठमाडौं, चैत १ । तपाइँ स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब स्मार्ट ज्याकेट पनि लगाउन पाउनुहुनेछ ।